Iziteshi Zedadewethu ezisebenzela i-NYC / NJ Area Khetha i-PlayBox Neo ye-Playout ne-Channel Brark | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Iziteshi Zedade TV ezisebenzela i-NYC / NJ Area Khetha i-PlayBox Neo ye-Playout ne-Channel Brark
Iziteshi Zedade TV ezisebenzela i-NYC / NJ Area Khetha i-PlayBox Neo ye-Playout ne-Channel Brark
July 30, 2020 - Ukuguquguquka kokuhamba komsebenzi kwesistimu yokudlala yeziteshi eziningi ye-PlayBox Neo nomlando wayo oqinile ngeziteshi ze-PMCM-TV i-WNWT (ikhaya leNew Jersey News Network) ne-WJLP (ekhonza iNew York City) iholele iqembu lesiteshi ukuthi likhethe ubuchwepheshe be-PlayBox Neo lapho isikhathi sifikile ekuthuthukiseni amandla ayo wokudlala nokudlalwayo kwesiteshi. I-WJLP ne-WNWT babelana ngezikhungo zokudlulisela e-4 Times Square maphakathi nedolobha iManhattan. I-WNWT okwamanje iku-inthanethi ne-PlayBox Neo, kanti i-WJLP izoba ngemuva kokuthi isiza sayo esiseNew York City iFreedom Tower singene ku-inthanethi ngokuhamba konyaka.
I-WNWT isanda kufaka i-PlayBox Neo AirBox Channel-in-a-Box amaseva kokuqukethwe, i-master playout nokulungiswa kwesipele. Ngamunye uhlelwe ngesoftware yakamuva ye-AirBox Neo-19 yokudlala. Iseva ye-AirBox Neo isetshenziswa ngama-generator wezinhlamvu ze-TitleBox Neo zokusebenzisana ngokugcwele kwe-4K UHD /HD/ Ukufakwa kwesiteshi kwe-SD esiteshini ngasinye. Isebenzisa zombili i-AirBox Neo ne-TitleBox Neo, isiteshi ngasinye sinamandla okudlalwa kwevidiyo okususelwa kufayili, ukudlula bukhoma ngokusakazwa nokumbondela kokuqhafaza.
“Nge-PlayBox Neo, sinokuvumelana kokushintshwa kweziteshi zethu sisebenzisa noma yini i-workflow esebenza kahle kithi,” kusho uJim McGowan, iTV / IT Engineering, i-PMCM-TV. “Njengamanje sisebenza ku-720p kodwa sithuthukisa kunoma iyiphi ifomethi yesiginali esiyithandayo. Singakwazi ukuxuba ama-codecs, sithathe isinali ye-SD bese siyenza HD. Singahlela izinhlelo, ezentengiso kanye nama-promos for playout ezenzakalelayo. Noma singagijima nje izinhlelo ngamabhlogo wokuthengisa, noma ushintshele ekusakazweni bukhoma okuphelele nganoma yisiphi isikhathi. Uma sithatha isinqumo sokuqapha ukuphuma kwethu, singakwenza futhi lokho ngaphakathi kohlelo lwethu lwe-PlayBox Neo. Inkululeko ayinikeza manje nangesikhathi esizayo inikeza ukuthula kwengqondo okukhulu. ”
Izici ezimbili ezishukumisayo ngemuva kokushintshwa ku-PlayBox Neo kwakuwukukwazi kohlelo ukusebenzisana kahle nezimbangela ze-Dual Tone Modulated Frequency (DTMF) kanye nesiteshi esikhona sezimoto kanye nepulatifomu ekhokhayo.
"Besinobudlelwano obuhle bokusebenzisana ngaphambili ne-PMCM kanye neziteshi zabo," kusho uVan Duke, Umqondisi Wezokusebenza Kwe-US. “Besikwazi ukuthi sizokwazi ukuxazulula noma yiziphi izingqinamba ababenazo ngezibangela ze-DTMF kanye nanoma yimaphi amaphutha okuxhumana phakathi kwe-playout nohlelo lwabo lokukhokhisa nezindlela zokukhokhisa. Lokho kuguquguquka yilokho okusetha i-PlayBox Neo ngaphandle kobuchwepheshe bokuncintisana. Izikhungo zokuxhumana zingamisa ukuhamba kwazo nganoma iyiphi indlela eziyifunayo, futhi sikwazi ukukutholela. ”
Izisombululo ze-PlayBox Neo zinikeza ukuhamba kokusebenza okungenamthungo ukuze kugcinwe iziteshi emoyeni ngokuhlanganisa ukuhlela, ukungena, ukudlala i-CG kanye nemidwebo esebenzisana ngaphakathi kwebhokisi elilodwa namathuluzi akude ukuqinisa amasheke we-QC, ukulungiselela nokuqapha. Okukhiqwayo kungaba yi-SDI noma ukusakazwa kwe-IP futhi kufanelekile kwizicelo ezahlukahlukene kufaka phakathi i-TV yendabuko yokusakaza, i-pay-TV, izikhungo zokudlala, satellite opharetha, njll.
I-AirBox Neo ingakwazi ukuhlanganisa amafayela wemidiya ahlukahlukene ohlwini lwadlalwayo futhi inikeze ukusakazwa kwe-SDI / IP okuningi kwe-UHD /HD/ Imiphumela ye-SD ngasikhathi sinye. Imidiya inganqunyelwa, ihlelwe noma ihlelwe kabusha. Imikhiqizo ebukhoma ihlelwe kabusha ukuvumela ukufakwa kanye / noma ukwenziwa kwemicimbi ehlukahlukene noma ukusakazwa bukhoma kuhlu lwadlalwayo. Okokudlalwa okuzenzakalelayo / ukusakazwa kwe-AirBox Neo kuvumela ukuhlelwa kohlu lwadlalwayo emavikini azayo.
I-TitleBox Neo inikeza ukuguquguquka okunamandla ekusebenzeni kwayo. Inikeza amandla okuxuba ukwakheka okungenamkhawulo ngesikhathi sangempela, njengokuthi: umbhalo, umqulu / ukukhasa; ama-logo, ukulandelana kwezithombe ezikhiqizwayo, amawashi, ukubalwa kwezikhathi, ama-timers, izinto ezi-2D, i-DVE, ukungena / ukuphuma kwezithombe, izithombe nama-banner, into yevidiyo, ukudlala kabusha, njll. Into ngayinye ye-CG ingahlelwa ngenkathi isemoyeni. Ushintsho lasemoyeni lungenziwa ngqo ezintweni ezikusikrini noma ngaphakathi kokukhipha kokubuka kuqala bese lusetshenziselwa umphumela omkhulu.
Ngaphambilini: Umklamo WeBlackmagic Umemezela iBhuloho elisha le-ATEM yokusakaza
Olandelayo: NGESIKHATHI NE-ANEVIA SIHLAZA ISIQINISEKISO ESIFANELEKILE SOKUFUNA ISITESHIZO NGESITOLO SAMAHHALA angama-87% WESABELWA ISAKHONO KANYE ne-90% YAMALUNGELO OKUVOTA I-ANEVIA